Famorian-tanora ao Shina hampitsarahana ny fahaverezam-pimaroamboary sy mampiroborobo ny firindrana miaraka amin’ny natiora · Global Voices teny Malagasy
Famorian-tanora ao Shina hampitsarahana ny fahaverezam-pimaroamboary sy mampiroborobo ny firindrana miaraka amin'ny natiora
Mafy ny toe-draharaha fa tsy mahavery fanantenana
Voadika ny 07 Oktobra 2019 16:18 GMT
Lanonam-panokafana MAB Youth Forum. Saripikan'i Ines Hirata, nahazoana alalana.
Notontosaina tao amin'ny Tahirin-tontolovoary Changbaishan ao Shina, tamin'ny 15-18 Septambra, ny tsenankevitry ny tanora na Man and Biosphere (MAB) Youth Forum momba ny Olona sy ny Tontolovoary taona 2019, nampiray toerana tanora miisa 176 avy amin'ny firenena miisa 82, hiresahana ny mahalaharam-pahamehana ny krizy ara-pimaroamboary nateraky ny fiovan'ny toetrandro.
Farafahakeliny firenena afrikana 15 no voasolo tena ary asongadin'ireny delegasiona ireny ny tsy fahampian'ny loharanombola sy ny fahazoam-baovao toy ireo fanamby lehibe hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro. Manome hirika ho an'ny tanora rehetra (18-35) hirotsaka an-tsehatra hita maso amin'ny COP 15 [kaoferansa momba ny toetrandro] ho avy izany amin'ny Convention on Biological Diversity (CBD na Dinan'ny Fimaroana biolojika) ny tsenan-kevitra.
Ny lohahevitry ny tsenankevitry ny tanora MAB dia ny “mirotsaka ao amin'ny hamaroamboary” izay mifanaraka amin'ny lohahevitry ny CoP 15: hoe “Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth,” [Sivilizasiona ekolojika: manangana hoavy ifampizarana ho an'ny manana aina rehetra eto ambonin'ny tany] izay hotontosaina ao Shina amin'ny taona 2020 izany. Ao amin'ny CoP 15, antenaina handray lasitrasa manerantany amin'ny hamaroamboary izay mety hamoaka ny vina 2050 ho an'ny hamaroamboary ny vondrompiarahamonina iraisampirenena, “Miaina mirindra miaraka amin'ny natiora”.
Mifantoka amin'ny fomba hampiasana hampitsaharana ny fahaverezam-pimaroamboary aorian'ny Lasitrasam-Pimaroamboary taona 2020 ihany koa ireo fotoana ifanoloran-kevitra ireo:
PEOPLE! Day 3 of the MAB Youth Forum. During interactive sessions, the #MABYouth community discussed it's perspective on how we can use the Post 2020 biodiversity framework towards solving the current biodiversity crisis.#UNESCO #Changbaishan #Biosphere… pic.twitter.com/NMv1iRC3Df
Ry vahoaka! andro fahatelon'ny tsenankevitry ny tanora MAB. Mandritra ny fotoana ifanolorankevitra, hiresaka izay fomba fijeriny amin'ny fomba hampiasantsika ny aorian'ny lasitrasam-pimaroamboary taona 2020 amin'ny famahana ny krizin'ny fimaroamboary amin'izao fotoana izao ny tsenankevitry ny tanora.
Navoitran'ny tsenankevitra fa mila fohazina amin'ny fanahoana fahaverezan'ny fimaroamboary ny zanak'olombelona.
Porofo siantifika no nampiseho fa hitondra fiantraikany mitera-boina tsy roa aman-tany ho an'ny planeta ny fiovan'ny toetrandro — ao anatin'izany ny biby sy ny zavamaniry — raha mbola mizotra amin'ny fisaina “fihariana araka ny mahazatra” ny olombelona.
Manasongadina ny maha-maika ny fanaovana vaiandohandraharaha ireo hetsika hamoahana ny Dinan'i Paris ny tatitry iraisan'ny governemanta taona 2018 momba ny fiovan'ny toetrandro. Ampitandreman'ny tatitry ny IPPC ny fiantraikan'ny fitomboan-kafanana manerantany 1,5°C talohan'ny vanim-potoana indostrialy ka nandrisika ny vahoaka sy ny governemanta izy hiatrika tsy misy hataka andro ny krizin'ny toetrandro.
— YEPP EUROPE (@YEPPEUROPE) September 23, 2019
Tsy ny olombelona ihany no tratran'ny fikorontanan'ny toetrandro fa ny biby ihany koa. Maro ireo karazana ahiana ho fongana. Raha te-hahalala bebe kokoa ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny voary dia jereo ny andian-tanta nosoratan'i David Attenborough
Delegsioan'ny tsenankevitry ny tanora MAB mianika ny tendrombohitra Changbai ao amin'ny tahirin-ttontolovoarin'i Changbaishan, Shina, 2019. Saripikan'i Ines Hirata, nahazoana alalana.
Filazan'ny tanora mifantoka amin'ny karaza-mananaina rehetra
Nanangana filazana misy fizarana efatra izay miompana amin'ireo olona isankarazany amin'ny fimaroamboary, fiovan'ny toetrandro ary fifandraisan'ny zanak'olombelona amin'ny tontolovoary ireo tanora ao amin'ny tsenankevitra. Voalaza ao amin'ny fanambaràna ihany koa ny filàna manandrateny tsy ho an'ny olombelona ihany fa ho an'ireo karazana zava-mananaina rehetra. Tsy maintsy maharaka haingana ny fiovaovan'ny toetrandro ireo biby marefo, indrindra fa ireo biby mpirenireny, na an-tanety na an-drano.
Mpihinam-biby monina ao anatin'ny faribolana arktika ny orsa an-tendrotany, izany hoe izay tafiditra ao amin'ny Riaka Arktika, sy ireo ranomasina mbamin'ny vondron-tany manodidina azy. Noho ny mety hisian'ny fahaverezam-ponenana ateraky ny fiovan'ny toetrandro, dia efa nosokaniana ho karazam-biby marefo ny orsa an-tendrontany, ary farafahakeliny telo karazana amin'ireo sobamponina orsa miisa 19 no mihena ny isany. Tompon'ny sary: Robert Linsdell via Flickr, CC BY 2.0.
Norafetin'ny tanora ny fanambaràna taorian'ny resadresaka lalina amin'ny fiainana mirindra miaraka amin'ny natiora, fiainana azo zakaina, fiovan'ny toetrandro ary ny fanadihadiana momba ireo fitahirizan-tontolo voary, mijery ny tanjaka, ny fahalemena, hirika ary fandrahonana (SWOT amin'ny teny anglisy). Fanahiana hafa hita ao amin'ny fanambaràna ny tsy fahampian'ny fahavononana ara-politika, ny filàna rariny eo amin'ny taranaka mifandimby, ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, ny fankatoavana ny zon'ny vahoaka tompotany sy vondrom-piarahamonina ao an-toerana.
Tany alohaloha tany tamin'ity taona ity, tamin'ny volana mey, namoaka tatitra ny Sehatra fanaovana Siansa Politika ao amin'ny Servisim-Pimaroamboary sy ny Rafiboary (IPBES) fa karazana iray tapitrisa no ahiana ho ringana noho ny fiovana eo amin'ny fampiasana ny tany sy ny ranomasina. Tany aloha tany ara-nanahary ny faharinganan'ny karazana. Ny fahasamihafany amin'izao fotoana dia ny olombelona no miteraka ny faharinganana noho ny fitomboan-kafanana sy ny fakàna ny ny fonenan'ny biby ary ny fanjonoana tafahoatra.
Raha eo amin'ny resaka fiovan'ny toetrandro, i Afrika no ao amin'ny mason'ny tadio. Ny tsikaritra indrindra, mihamanjavona ny fonenana mifanaraka indrindra sady tsy hita any an-kafa ho an'ireo biby mpirenirenin'i Afrika ary vao maika mihamarefo ireny biby ireny manoloana ny fiovan'ny toetrandro noho ny fihakelezan'ny sehatra ahafahany mihetsika. Mampihena haingana ny sehatra ho an'ny fiainan-drenireny ny fampiasan'ny olombelona ny tany noho ny fitomboan'ny mponina, ny tinadim-vokatra avy amin'ny fambolena, ny fitrandrahana ankibon'ny tany ary ny rafi-pampandrosoana raki-tapisaka.
Fanampin'izany, miatrika fahasarotana maro ihany koa ny biby an-dranomasina noho ny fitomboan'ny asidra sy ny fitomboan'ny hafanan'ny rano. Mihamafana ny riaka ary mamono ny rafi-piainana an-driaka (ranomasina) izany.
The @IPCC_CH report is clear ?
Global warming is drastically changing #OurOcean.
Also underlined by @IPBES, the call by Science is: #ActNow
We in ?? agree: https://t.co/TJstIj07u6 #Biodiversity2020 #OceanEU pic.twitter.com/AL7yoegrXU
Mazava ny tatitry ny IPCC_CH
Manova be dia be ny riakantsika ny fitomboan-kafanana ankapobeny
Fahapotehan'ny fiainana ambany ranomasina.
Ary asongadin'ny IPBES ihany koa, ny antson'ny siasa dia hoe Mihetseha izao.
Mitovy hevitra amin'izany izahay ato ??
Tamin'ny faramparan'ny Septambra ny IPCC namoaka tatitra manokana momba ny Riaka sy ny “Cryosphere” (tontolo mangatsiaka dia mangatsiaka) ao amin'ny toetrandro mikorontana. Asehon'ny tatitra fa raha mbola mitohy ny fandefasana etona mampitombo hafanana, hanimba ny riaka sy ny cryosphere ny fikorontanan'ny toetrandro. Mety hoe tsy monina any an-dranomasina na any amin'ny tontolo tena mangatsiaka ny olona, fa hisy fiantraikany amin'ny olombelona sy ny biby ny fikorontan'ny toetrandro any amin'ireny faritra ireny. Hampifangaroharo ny vondran-dranomandry ary hampisondrotra ny haavon'ny ranomasina ka handrahona ny zava-miaina rehetra eto amin'ny planeta.
Tena mafy ny toe-draharaha fa tsy mahavery fanantenana, satria mbola manohy mampanome vahana sy manangona fahalalàna siantifika tsy nosaintsainina akory ampolony taona vitsivitsy izay ny tanora. Asehon'ny tatitra siantifika fa ankoatra ny tafahoatra ataon'olombelona mahatonga ny fikorontanan'ny toetrandro dia efa hainy tsara ihany koa ny karazam-boina efa miandry. Raha miasa haingana ny tanora ary mamaly ny maha-laharam-pahamehana azy ny fahavononana politika, dia mety mbola afaka misoroka ny voina ihany ny olombelona.